BlackBerry Messenger Voice - Miresaka tsy misy amin'ny Blackberry | Avy amin'ny Linux
Efa nampoizinay izany Blackberry 10 dia havoaka amin'ny fiandohan'ny volana Janoary, ary toa ny RIM dia mikendry ny basy rehetra mankany amin'ny Rafitra fiasa vaovao.
Tsy ho premiering fotsiny io OS vaovao manolotra ny vokariny antsoina hoe koa izy BBM Voice (BlackBrry Messenger Voice) izay mamela ny fitaovana samihafa Mifampiresaka maimaim-poana amin'ny Blackberry.
Ity serivisy vaovao ity dia tsy azo ampiasaina raha tsy amin'ny alàlan'ny fifandraisana Wi-Fi nanomboka teo ny teknolojia 3G, LTE ary 4G dia tsy tafiditra ao amin'ny fampiasana an'ity serivisy ity amin'ny kinova andrana.
El BBM Voice Azo ampiasaina amin'ny kinova 7 izy io ary vinavina fa hisy kinova ofisialy ho an'ny Blackberry 5 na ho avy tsy ho ela.
Na dia eo amin'ny dingan'ny fitsapana aza ity serivisy ity dia efa afaka izany to download ary ankafizo ny asany lehibe indrindra dia ny antso maimaim-poana eo anelanelan'ny Smartphone.
Ny mampiavaka ny BBM Voice hamela antsika izy ireo miresaka maimaimpoana miaraka amina interface iray tena tsotra sy miaraka amin'ny écran split mba hahafahana manatanteraka lahasa isan-karazany raha ampifandraisina ilay antso. Izy io koa dia ahitana mpamaritra iray izay hampandre antsika hoe izay fifandraisana misy no azo anaovana ilay Antso maimaim-poana.
Ity filokana vaovao ataon'ny RIM ity dia mitady hifaninana mivantana amin'ireo terminal Android sy iOS izay manamafy ny tenany eo an-tsena.
Raha tianao izany miresaka maimaim-poana amin'ny Blackberry azonao atao ny mampiditra an'ity rohy manaraka ity ary ampidino ny kinova Beta an'ny BBM Voice.
Sintomy maimaim-poana ny BlackBerry Messenger Voice
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » BlackBerry Messenger Voice - Miresaka tsy misy amin'ny Blackberry anao